Akara nka na karama iko: echiche na ndụmọdụ kacha mma | Mmeghari ohuru Green
Nka na karama iko
A na -ewepụta ọtụtụ ihe mkpofu n'ụlọ kwa ụbọchị. Otu n'ime ha bụ karama iko. Enwere ike ime ọtụtụ nkà nka karama iji nyere aka na -emegharị ihe ma na -agba ume imepụta ihe. Enwere ike iji ha ka ha nwee ọ timeụ n'oge efu gị. Ọ bụrụ na ejiri iko mee ha, anyị nwere ike iji ịma mma nke iko, yana nghọta na ụdị ya ka anyị nwee ike ịmepụta ihe bara uru wee gbanwee ha ka ọ bụrụ ihe karịrị ihe ịchọ mma dị mfe.
N'isiokwu a, anyị ga -agwa gị ụfọdụ nka na karama iko.
1 Nka na karama iko
1.1 Oriọna karama
1.2 Ihe ndọba oriọna ma ọ bụ ihe kandụl
2 Nka na karama mmanya mmanya
3 Vase na terrarium nwere karama iko achọ mma
Nka iko ma ọ bụ karama iko na-enye gị ohere iweghachi ịdị mma nke ihe mkpofu nwere ike ịdịte aka, dị ka karama mmanya, mmanya, ma ọ bụ ihe ọ juiceụ juiceụ. Ọ bụghị mgbe niile ka ọ dị mkpa ịkatọ karama iko n'ime akpa nrụgharị, mana enwere ike nye ya ndụ bara uru nke abụọ. Agbanyeghị, ọ ka mma imegharị ha karịa ịgwakọta ha na mkpofu ahịhịa.
Agbanyeghị, ebe a anyị na -ekwe nkwa na anyị ga -eji ha mee ihe bara uru ma maa mma, ihe kwesịrị inwe mmasị, dị ka eserese ma ọ bụ ịcha ha. Echiche ndị anyị na -ewetara n'okpuru bụ naanị ụfọdụ ụzọ a na -ejikarị emegharị ha, mana anyị na ha nwekwara ike ịme ọtụtụ ihe ndị ọzọ, dị ka idobe ha n'akụkụ nkpuchi na ịnụ ụtọ echiche ndị anyanwụ na -ada n'ime ha, ma ọ bụ jupụta ya dị ka obere ihe.
Ọbụlagodi na anyị bụ ndị ọrụ aka, ha dabara adaba maka iwu mgbidi kachasị chọọ mma. Ndị a bụ ụfọdụ echiche maka otu esi ejigharị karama iko wee gbanwee ya ka ọmarịcha ihe ịchọ mma.
Otu n'ime ụzọ kacha mma iji megharịa ihe a bụ ịme ọmarịcha oriọna okpokoro ma ọ bụ kpọgidere ya na karama mmanya. Ọ dị mfe karịa ka ọ dị. Iji mee nke a, anyị ga -ebu ụzọ hichaa karama ahụ. Anyị na -ewepụ akwụkwọ mmado ma ọ bụ akwụkwọ nwere ụdị ngwaahịa. Ọ bụrụ na ọ pụtaghị kpamkpam, Anyị nwere ike jiri mmiri ọkụ ma ọ bụ mmanya na -ehicha ya na akwa iji mechaa wepụ akwụkwọ ahụ.
Mgbe ahụ, anyị ga -anọgide na -egbutu ya. Ụzọ kachasị mfe bụ iji akwa akwa akwa (dị ka yarn nke ejiri na crochet) na acetone. Anyị na -atụgharị mpempe akwụkwọ ahụ ka ọ bee ugboro ole na ole wee kee eri ahụ. Anyị wepụtara ya na ala, mikpuo ya na acetone ma weghachi ya n'ọnọdụ ya. N'otu oge ahụ anyị na -etinye mmiri akpụrụ mmiri n'ime obere ịwụ ka oyi wee dị ya nke ukwuu.
Ozugbo anyị weghachiri eri ahụ n'ime karama ahụ, anyị na -amụnye ya ma tụgharịa ya ka ọkụ wee ghara ịnọrọ naanị n'otu akụkụ. Anyị na -enye ya ihe dị ka okirikiri iri ma mikpuo ya na mmiri. Kpọtụrụ oyi ga -eme ka mpaghara eriri ahụ kewaa, nke ga -enyere anyị aka ịkpụcha nke ọma. Ọ dị mkpa iyi iko plastik iji gbochie nchapu iko ịbanye n'anya anyị.
Ihe ndọba oriọna ma ọ bụ ihe kandụl
Iji mee chandeliers, chandeliers ma ọ bụ oriọna, anyị nwere ike chọọ karama iko, ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ mara mma nke ukwuu, dị ka ụfọdụ mmanya ma ọ bụ ihe ọ drinksụ whiteụ na -acha ọcha, anyị nwere ike iji ya ozugbo. Iji mee nke a, anyị chọrọ w ogho oriọna na njikọta, dị ka njikọ maka ọkpọ mmiri ọkụ dị n'èzí, Teflon, na mmanya na -ere ọkụ.
Anyị na -ekpuchi akụkụ nke nkwonkwo na Teflon ruo mgbe edoziri ya na dayameta nke karama ahụ, mgbe ahụ anyị na -etinye wick. Anyị ga -enwe ogologo okpu. N'ime karama anyị na -ewebata mmiri mmiri, na nke a mmanya, mana ọ nwere ike ịbụ mmanụ ọkụ, anyị na -etinye okpu na oriọna. Anyị nwere ike iji ya otu a, ma ọ bụ anyị nwere ike iji ogwe anụ ọhịa 4 inch na ihe nkedo iji dozie ya na mgbidi ka ọ dị anya ma ghara ịgba mgbidi ahụ ọkụ.
Nka na karama mmanya mmanya
N'ezie anyị gafere otu karama gin nke anyị nyere iwu. Site na nke a anyị nwere ike ịme igwe ncha. Nke a dị mfe. Naanị ihe anyị ga -achọ bụ onye na -ekesa ihe, ọkacha mma igwe, ka anyị kpọgide ya n'elu karama ahụ. Anyị nwere ike iji ncha na -asa aka n'ime ụlọ ịsa ahụ, ncha kichin ma ọ bụ ebe ọ bụla anyị nwere ike iche n'echiche.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịme ha n'aka, ị nwere ike iji akwụkwọ nwere agba kpuchie ha ma ọ bụ mee ọmarịcha eserese. Naanị tinye otu mpempe akwụkwọ ma ị nwere ike gbanwee karama na -agwụ ike ka ọ bụrụ ihe ịchọ mma.
Ihe ọzọ dị mma bụ iji iko mee karama, naanị ihe ị chọrọ bụ ihe na -egbu iko, ma ọ bụ ị nwere ike iji aka mee ya site na iji usoro ọkụ na oyi ruo mgbe ọ ga -agbaji, dị ka nke anyị na -eji maka ọkụ karama. Naanị ị ga -etinye echiche gị ka ihe dị oke egwu wee pụta.
Ụzọ kacha mma iji agba karama iko bụ iji eserese mbadamba. Na mgbakwunye na agba ojii, enwere agba dị iche iche, ha niile matte mara mma nke ukwuu. Enwekwara ike iji ha dee ahịrịokwu na nzu. Tinye akwa nzu na karama iko ị ga -eku ume ndụ n'ime ha.
Vase na terrarium nwere karama iko achọ mma
Maka nka a anyị chọrọ iko ma ọ bụ karama iko na ụfọdụ ogologo ọkpa. N'ezie ị nwere ụfọdụ ogologo ọkpa na -ejighị ya ma ị nwere ike nye ya ndụ ọzọ. Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ jeans ọ ka mma ebe ọ bụ na enwere ike chọọ ya na ndo dị iche iche na -acha anụnụ anụnụ.
Iji mee nke a, anyị na -edobe ụdọ toned na grajentị site n'ọchịchịrị ruo na nke kacha mara mma. Anyị nwekwara ike iji akụkụ dị iche iche nke uwe ogologo ọkpa, dị ka akpa ma ọ bụ bọtịnụ, wee bepụ oghere nke nha dị iche iche iji mee patches ma ọ bụ collages.
Terrariums nọ n'ụdị ejiji na obere ubi. Ugbu a, anyị na -atụ aro ka ị tụgharịa karama iko n'ime terrariums ebe ị nwere ike inye osisi gị ndụ ma n'otu oge ahụ chọọ akụkụ pụrụ iche mma. Kedu ihe ọzọ ị gaghị na -echegbu onwe gị mgbe niile maka ịgbara ha mmiri. Ị nwekwara ike iji ha dị ka a ga -asị na ha bụ ite mana, n'ọnọdụ ahụ, ite pụrụ iche nke ị ga -eji mepụta mmetụta pụrụ iche. Osisi succulent dị mma maka ịkụ ụdị ụdị ite a n'ihi na ha agaghị achọ obere nlekọta. Ha zuru oke maka icho mma ime ụlọ.
Anyị nwekwara ike ịmepụta karama na -atụba n'ubi mara mma. Were agba mejupụta ubi gị, teres ma ọ bụ patio ị ga -enye ikuku mbụ akuku ebe ị maghị ihe ị ga -etinye. Ịchọghị ihe ọzọ iji nweta mmetụta na -awụ akpata oyi n'ahụ.
Enwere m olile anya na site na ozi a ị ga -amụtakwu gbasara nka na karama iko.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Nzughari » Nka na karama iko